5 Tilmaamood oo yaab leh si loo laba jibaaro wax soo saarkaaga | Martech Zone
Saturday, April 28, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Daa’uud igu calaamadeeyay bartiisa. Halkaas ayuu ku leeyahay xil weyn Sida Feejignaanta Looga Siiyo Wax Soo Saarka Weyn. Dhexdeeda, wuxuu ku sheegayaa sida uu u kala saaro 50 daqiiqo maalin kasta inuu diiradda saaro oo uu fuliyo.
Aniga iskuma edbiyin inaan waqti u qoondeeyo maalin kasta sidan oo kale laakiin waa wax aan isku dayi doono. Waa tan sida aan wax soo saar u ahaado… qaarna waxay u muuqan karaan wax lala yaabo laakiin waxay iga caawineysaa inaan maareeyo maalinta shaqada umuuqata inaan la maareyn karin. Waa wax xiiso leh in qaar ka mid ah talooyinkeyga iyo hababkeygu ay isku daboolaan Dawud!
Waagii hore, waxaan aaminsanahay inaan aqriyay in celceliska shaqaalaha Mareykanka ay dhab ahaantii soo saaraan ilaa 5 saacadood oo shaqo ah maalintii in kastoo ay shaqeeyaan wax ka badan 8. Waa tan sida loo labalaabi karo 5taas saacadood oo loo helo 10 saacadood oo wax soo saar ah 8 saacadood maalintii.
Jooji ka jawaabida taleefankaaga:
Kama jawaabo taleefankayga iyo taleefankayga gacanta illaa aan diyaar u ahay mooyee. Saaxiibbaday iyo asxaabteyduba waa u barteen tan qaarna waqti adag bay i siiyaan. Dadka qaar waxay u maleeyaan inay tahay edeb darro. Ma yeelo U rogida taleefankaaga ama taleefankaaga gacanta fariinta codka waxay u dhigantaa xiritaanka albaabka xafiiskaaga si shaqada loo qabto. Runtii waan aaminsanahay taas wax soosaarku wuxuu ku saleysan yahay xawaare… Dardar yaraanta oo aad wax soo saar yar tahay. Kuwa idinka mid ah ee barnaamijkaas ku jira, tani waa run gaar ahaan. Waxaan heli karaa hal usbuuc oo barnaamij ah oo lagu sameeyo hal maalin gudaheeda haddii aanan kala go'in. Marar badan, waxaan barnaamij ka sameeyaa habeenkii oo dhan mashruucyo maxaa yeelay waxay ii oggolaaneysaa inaan gabi ahaanba 'tago aagga'. Qiyaas ahaan keyd: 1 saac maalintii.
Jooji dhageysiga Codka:
Ma dhageysto fariinta codka. Waa maxay warka ?! Kaliya waxaad tiri adigoon taleefanka kajawaabin hadana ma dhageysaneysid farriinta codka ?! Maya Waan hubiyaa farriinta codkayga isla marka aan maqlo cidda ay tahay, isla markiiba waan tirtiraa fariinta oo dib ayaan u wacaa. Waxaan ogaaday in waqtigaas 99%, ay tahay inaan qofka dib ugu yeero, haddaba maxaad u dhageysaneysaa dhammaan farriinta codka? Dadka qaarkiis waxay ka tagaan fariimaha hal daqiiqo oo dheer! Haddii aad ii dhaafto farriin cod ah, ka tag magacaaga iyo lambarkaaga iyo degdeggaaga. Waan ku soo wici doonaa isla marka aan fursad u helo. Wax badan ayaan ka helayaa arintan. Qiyaas ahaan keyd: 30 daqiiqo maalin kasta.
DWT - Wadid Intaad Wadahadlayso:
Waxaan wacaa dadka markaan wado. Waxaan haystaa ilaa 1 saac maalintii safarka waana waqtiga ugu fiican ee aan la hadlo dadka. Weligay xitaa kuma dhowaanin inaan shil galo sidaa darteed ma doonayo inaan maqlo dhammaan waxyaabahan nacasnimada leh ee ku saabsan kaxeynta baabuurka intaan hadalka hadlayo oo ah dhibaato. Waxaan awoodaa inaan gabi ahaanba xooga saaro labadaba. Haddii taraafiggu xumaado, si fudud ayaan u cudurdaaranayaa oo waxaan wacayaa qofka. Qiyaas ahaan keyd: 1 saac maalintii.
Waan diidaa casuumaadaha. Waa hagaag, waxaad tidhaahdaa, hadda maskaxdii wuu ka baxay! Waxaan u arkaa shirarka intooda badani inay yihiin wakhti lumis. Waxaad igu arki doontaa mid igu adag inaan aqbalo casuumaadaha kulanka ee aan lahayn qorshe hawleed ama qorshe hawleed. Haddii hadaf uusan jirin kulanka, malaha ma imaan doono. Waxay ka careysiineysaa qaar ka mid ah shaqaalaha ila shaqeeya, laakiin kama walwalayo taas. Waqtigeygu aad iyo aad buu qiimo ugu leeyahay aniga iyo shirkaddeyda. Haddii aadan taas ixtiraami karin, markaa ma ahan dhibkeyga - waa adiga. Baro sida loo maareeyo waqtiga dadka si wax ku ool ah! (Waxaan sidoo kale kajawaabaa e-maylkeyga PDA-da inta lagu gudajiro kulamada marka dareenkeyga aan loo baahneyn.) Keydso qiyaas ah: 2 saacadood maalintii
Qor oo Wadaag Qorshayaasha Waxqabadka:
Midkani malaha wax yaab leh. Waa wax dhab ah in la sii wado wax soo saar, in kastoo. Waxaan qoraa qorshe hawleedyo ay kujiraan Yaa, Maxay iyo Goorma iyo tan ugu muhiimsan, lala wadaago qofka ama kooxda aan la shaqaynayo.
Yaa - Kumaa helaya it aniga, ama yaan helayaa it ku
Waa maxay - Waa maxay waxa la keenayaa? Si gaar ah u sheeg!
Goorma - Goorma ayaa la keenayaa? Taariikh iyo xitaa waqti ayaa kuu kaxeyn doona si aad ula kulanto waqtigaaga.
Keydinta Qiyaas ahaan: 30 daqiiqo maalin kasta.
WFS: Ka shaqeynta Starbucks
Hal talo oo dheeri ah oo adiga ama adiga kuu shaqeyn karta: Waxaan ka shaqeeyaa Starbucks. Subaxyada aanan lahayn shirar, wicitaanada macmiilka, ama aan la shaqeeyo kooxahayga, inta badan waxaan u kaxeeyaa dhanka Starbucks oo aan shaqada ka joojiyaa. Starbucks dadku waa mashquul waxayna abuuraan jawi fowdo la xakameeyo oo aan jeclahay. Waxaan u shaqeeyaa si adag oo dhakhso leh Starbucks. Kuraasta aan fiicnayn ayaa iyana caawisa. Haddii aanan degdeg uga bixi karin halkaas, waxaan ku qoomameynayaa hoosta nabar xanuun leh. Qiyaas ahaan keyd: 4 saacadood usbuucii.
Ma jiraa Qof Weydiinaya Ask.com?
Apr 28, 2007 at 1: 04 PM
Wow, waxaad ku musbaartey shaygaas kulanka. Meesha aan ka shaqeeyo, haddii aad diido kulan, waxaa loo arkaa edeb darro, habaar habaar!
Waxaad aadeysaa kulanka, 5 daqiiqo gudahood, sheekooyinka nolosha shaqsiyadeed ayaa soo baxaya waxayna isu rogaysaa wax isku xir ah. Taasi waxay ka careysiisaa naarta nool aniga! Kulan 10 daqiiqo ah ayaa badanaa lagu kordhiyaa hal saac sababtaas darteed!
Waxaan bilaabayaa inaan diido kulanka oo aan lahayn ujeedo ama ajande la sheegay, ama kuwa aanan runtii u baahnayn. Taasi dabcan, ilaa codsigu uusan ka imaanin sayidkayga unless
Xaqiiqdii waan seegay qodobkaas, AL. 'Bosses' ayaa ka reeban weligood xukun. 🙂
Apr 28, 2007 at 10: 05 PM
Waa inaad fiirisaa buug cusub oo soo baxaya oo la yiraahdo Toddobaadka Shaqada ee Afarta Saacadood ee uu qoray Timothy Ferriss. Marar dhif ah ayuu shirar yeeshaa, oo wuxuu fiiriyaa oo keliya emaylka hal mar usbuucii ama wixii la mid ah - si la mid ah mowduuca aad ka hadlayso. Dhawaan ayaan dhagaystay hadalkiisii ​​SXSW oo ay ku heleen runtii xiisa badan. Waxaan rajeyneyaa akhrinta buugga.
Apr 29, 2007 at 12: 31 AM
Waan helay Bogga Tim Ferriss sidoo kale. Waxaan rajeynayaa inaad hubiso buugga!
Apr 30, 2007 at 8: 13 AM
Haa. Si wax soo saar leh waa inaad u dhigtaa wicitaanada taleefanka iyo emaylka meeshuu ku habboon yahay. Haddii aad addoon u tahay iyaga oo dhan maalintii oo dhan - waxna ma qabtaan laakiin waxay carqaladeeyaan socodka shaqadaada.
Mahad Dawud! Bulshadeena 'Ameerikaanka-Me-Me-Me-Me', dadka qaarkiis kuma qanacsanaan markaad ka jawaabi weydo emayl ama taleefan isla markiiba. Laakiin waxaan go'aansaday inaan fahansiiyo.
Apr 30, 2007 at 11: 34 AM
Akhrinta emaylku waxay nuugi kartaa waqti aad u badan. Waan ogahay dadka qaar oo ay tahay inay akhriyaan farriin kasta isla markay maqlaan “garabka”. Waan damiyay ogeysiiskeyga emaylka, waxaana ku aqriyay emayl jadwalka MY. Waqtiyada qaarkood maalintii ayaa iigu fiican inaan akhriyo emaylka, ka jawaabo wicitaanada, iwm.
Hadda ma aadan sheegin blogging, laakiin dhab ahaantii waxay qaadataa waqti! 😉
Blogging waa maalgashi, in kastoo, Becky. Waxaan isku xirayaa oo aan baranayaa inta aqrinta iyo qorista. Sidoo kale, oo leh dakhli yar oo xayeysiis ah, dhab ahaan waxaa laygu siiyaa barta. Ma hubo haddii aan saacad uun samaynayo… laakiin waxaan u maleynayaa inay u qalanto dhamaadka.
Waad ku mahadsantahay fikradaada! Shaki kuma jiro akhriska iyo dabaasha aan dhammaadka lahayn mid ka dhigi kara mid aan wax soo saar lahayn!
Farriin weyn - jeclahay. Aad ayey ugafiican yihiin liisaska aan dhamaadka lahayn ee 20-30 talooyin wax soo saar oo aadan xitaa xasuusan karin, waligaa ha u maleynin inaad fuliso.
Waan kugu raacsanahay John! Waxay noqon laheyd mid aan wax soo saar laheyn in qofkasta laga dhigo wax aqriya wax kabadan 5!
Waa ogeysiisyada iyo habsami u socodka Google ee aniga igu galaya! Waad ku mahadsan tahay ogolaanshaha aad i siisay inaan aado Aaga.
Digniinta Google aniga ayaa sidoo kale socda. Kaliya waxaan hubiyaa laba jeer maalin kasta, in kastoo!